सरकार छाड्न देउवाको आनाकानी,सरकारमै भएर नी प्रचण्डलाई हतारो - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सरकार छाड्न देउवाको आनाकानी,सरकारमै भएर नी प्रचण्डलाई हतारो
प्रकाशित मिति: २ पुष २०७४, आईतवार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा गठन नभई नयाँ सरकार गठन नहुने भन्दै पद छाड्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।जनताको मतबाट अन्य पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे सहज रुपमा सरकारबाट बाहिरिने राजनीतिक संस्कार देखाउनुभन्दा देउवाले केही महिना भए पनि सत्ता लम्ब्याउने चलखेल गरेको आरोप एमाले र माओवादीहरुले लगाइरहेका छन्। संविधानको व्यवस्था अनुसार र नेपाली कांग्रेसको तर्क अनुसार राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि पनि सरकार गठन हुँदा २ महिना लाग्ने देखिन्छ।
सरकारमै भएर नी प्रचण्डलाई हतारो
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहज वातावरण बनाउन भनिरहेका छन् । तर उनी आफैले आफ्नो पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता ल्याउने नामै लिँदैनन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सुनिश्चितता भएपछि पार्टीका मन्त्रीले सरकार छाड्छन् भनेका प्रचण्डले चुनावको परिणाम आइसक्दा पनि सरकारबाट फिर्ता बोलाएका छैनन् । राजनीतिक अवरोध गर्न खप्पिस प्रचण्डको पार्टीले नै सरकार नछाडेपछि निकास कसरी निस्केला त ?
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसंग चुनावी एकीकरण गरेपछि नैतिकताका आधारमा प्रचण्डले सरकारबाट माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने थियो । त्यसो नगरेपछि वाध्य भएर प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका ९ मन्त्री र ८ राज्यमन्त्रीलाई विना विभागीय बनाएका थिए ।
त्यही विना विभागीयकै हैसियतमा असोज ३१ गतेदेखि नै माओवादी सरकारमा रहेको छ । यता, प्रचण्ड देउवालाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
यही दोहोरो चरित्रका कारणले अहिले गतिरोध लम्बिदो छ । एकातिर राष्ट्रिय सभा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा एक महिना अघिदेखि नै थन्किरहेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमति नगरी अध्यादेश पास नगर्ने अडानमा छिन् ।
अनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नयाँ सरकारमा जान हतारो भइरहेको छ । त्यही माओवादी फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशलाई कसरी निष्क्रिय बनाउने भन्ने रणनीति बनाउनसमेत व्यस्त छ। यही दोहोरो चरित्रले गर्दा पहिले पहिले जस्तै राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको छ ।
चुनावपछि त सबै समस्याको समाधान हुन्छ भने पनि माओवादी र एमालेको गैरजिम्मेवारीपनका कारण मुलुक केही न केही अल्झनमा परिरहेकै छ । प्रधानमन्त्री देउवा भने एक मिनेट पनि सरकारमा बस्ने इच्छा नभएको बताउँछन्
केन्द्रीय समिति बैठकमा यस्ता छन् पौडेल–सिटौला पक्षका एजेन्डा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबीच चार दिनअघि बसेको […]
विप्लवको बन्द : त्रासले शैक्षिक संस्था बन्द र यातायात पनि प्रभावित,देशभर कहाँ के भयो?
काठमाडौं । भोजपुरमा प्रहरीको गोलीबाट कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे मारिएको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव […]
पत्रकारको नाकको डाँडी भाँचिदिने धम्की दिएका मेयर ‘पार्टी सम्पर्कबाहिर’
काठमाडौं । पत्रकारलाई नाकको हड्डी भाँचिदिने धम्की दिएका मोरङको इटहरी उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी […]
को हुन् पक्राउ परेका ‘विप्लव’ माओवादीका मध्य कमाण्ड ओली ? (राजनीति नालीबेली)
काठमाडौं । प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ माओवादीका मध्य कमाण्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओलीसहित आठ जनालाई […]
प्रधामन्त्रीद्वारा देशबासीको नाममा सम्बोधन (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान देशबासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन् । नयाँ वर्ष २०७६ […]
१ हजार ७ सय ७६ किलोमिटर यात्रामा बाबुराम,यस्तो छ कार्यक्रम, उद्देश्य के ?
काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले माघ १५ गतेदेखि जनसंवाद यात्रा सुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । पूर्वको […]